Ukufakelwa kwee-Coil Coating Coils Ukudibanisa umshini wokufudumala wokutshisa
Ikhaya / Iindleko zokushushumbisa iikhoyili / Induction Ubushushu booyilo kuyilo
Udidi: Iindleko zokushushumbisa iikhoyili tags: i-couction brazing coil, iikhoyili zokufakelwa, uyilo lwekhoyili lwangaphakathi, i-coil coil, iikhoyili zokufudumala, i-induction enyibilikisayo, i-coil welding ye-induction, uyilo lwe-inductor, ba khuthazi
Nokuba yeyiphi imilo, ubungakanani, okanye isitayile se-induction coil oyifunayo, sinokukunceda! Nazi ezinye ezimbalwa zamakhulu zoyilo lwekhoyili esisebenze kunye nazo. Iipancake coil, ii-coil ze-helical, i-coil ye-concentrator… isikwere, isangqa kunye ne-tubing engunxantathu… Ukujika kube kanye, ukujika ezintlanu, ishumi elinambini-ukujika… phantsi kwe-0.10 ″ ID ukuya kwi-ID engaphezulu kwe-5…… ukufudumeza kwangaphakathi nangaphandle. Nokuba yeyiphi na iimfuno zakho, sithumele imizobo yakho kunye neenkcukacha zesikowuteshini esikhawulezileyo. Ukuba umtsha kufudumezo lokungeniswa, thumela iinxalenye zakho kuvavanyo lwasimahla.
Ngomqondo othile, i-coil design yokufudumala ukutshitshiswa yakhiwe kwi-esitolo enkulu yedatha yombhalo ophuhliso lwayo luvela kwii-geometri ezininzi ezilula ezifana
coil solide. Ngenxa yoko, i-coil design isekelwe kumava.
Olu chungechunge lwamanqaku luhlola iingqwalaselo ezisemgangathweni zombane kwi-design of inductors kwaye ichaza ezinye zeekhoyili eziqhelekileyo ezisetyenziswayo.
Iingcamango zoyilo oluyisiseko
I-inductor ifana ne-transformer eprayimari, kwaye umsebenzi olinganayo
kwi-secondary transformer (Fig.1). Ngoko ke, ezininzi iimpawu
lwabaguquli bayabaluleka ekuphuhlisweni kwezikhokelo zokuyilwa kweelayili. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kubatshintshi yinyaniso yokuba usebenza kakuhle
ukudibanisa phakathi kwe-windings kulandelelanisa ukuya kwinqanaba lomgama phakathi kwabo. Ngaphezu koko, okwangoku kwiprayimari ye-transformer, eyandiswa yinani lokujika okuphambili, lilingana nolwangoku kwisekondari, lwandiswe yinani yokubuya kwesekondari. Ngenxa yobu buhlobo, kukho imimiselo emininzi ekufuneka igcinwe engqondweni xa uyila nayiphi na ikhoyili
I-1) Ikhoyili kufuneka idibaniswe kwi nxalenye ngokukhawuleza njengokwenokwenzeka ukuthunyelwa kwamandla angaphezulu. Kuyinto enqwenelekayo ukuba inani elikhulu kunazo zonke leemigca ehambayo lidibanisa umsebenzi osebenza kuyo kwindawo. I-denser ye-flux kule ngongoma, ephakamileyo iya kuba yinto ekhoyo eyenziwa kwinqanaba.
I-2) Inani elikhulu kunazo zonke zomgca we-solenoid libheke kwiziko lekhoyili. Imigca ye-flux igxininiswe
ngaphakathi kwekhoyili, ukubonelela ngezinga eliphezulu lokushisa apho.
I-3) Ngenxa yokuba ukugqithisa kukugxininise kufuphi nekhoyili iyajika kwaye iyancipha ngakumbi, i-geometric centre yekhoyili iyindlela ephosakeleyo yokuhamba. Ngaloo ndlela, ukuba inxalenye yayiza kugqitywa kwiziko lekhoyili, indawo ekufuphi kwikhoyili iyajika idibanisa inani elingaphaya lomzila okhulayo kwaye ngoko kuya kutshayelwa kumgangatho ophezulu, kanti indawo
inxalenye yokuncincilana okuncinci yayiya kutshiswa kwizinga eliphantsi; Iphethini eliphumo liboniswa ngesicwangciso ngokwefayile ye2. Esi siphumo sichazwa ngakumbi kwi-heat-induction.